ESI EWEPUTA DVD NA AVI - ỤDỊ FAỊLỤ - 2019
Nyefee DVD-Video na AVI format
A naghị ahụkarị ndị na-agagharị na Netgear n'azụ ndị Soviet, ma ha ejiriwo mepụta onwe ha dị ka ngwaọrụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-eme njem a, bụ ndị dị n'ahịa anyị, so na mmefu ego na mmefu ego nke etiti. Otu n'ime ndị kasị ewu ewu bụ ndị ntụgharị usoro N300 - nhazi nke ngwaọrụ ndị a ga-atụle n'ihu.
Na-edozi N300 okporo ụzọ
Maka nmalite ọ bara uru ịkọwa isi ihe dị mkpa - nchịkọta N300 abụghị nọmba nlereanya ma ọ bụ nhọpụta nke ụdị ihe nlereanya ahụ. Ndepụta a na-egosi ọsọ kachasị nke ọkọlọtọ 802.11n nke wuru Wi-Fi na rawụta. N'ihi ya, e nwere ihe karịrị igwe iri na abụọ na ndepụta a. Ọnọdụ nke ngwaọrụ ndị a bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, ya mere, a ga-eji ihe ịga nke ọma mee ihe atụ n'okpuru ebe a ịmepụta mgbanwe niile dị iche iche nke ụdị.
Tupu ịmalite nhazi ahụ, onye nrụnye ga-edozi nke ọma. Nke a na-agụnye ihe ndị a:
Họrọ ebe nke router. A ghaghị itinye ngwaọrụ ndị dị otú ahụ site na isi nkwụsịtụ ga-ekwe omume na ihe mgbochi metal, ọ dịkwa mkpa ịhọrọ ebe dịka n'etiti etiti mkpuchi nwere ike.
Jikọọ ngwaọrụ na ọkpọ ọkụ ma jikọọ eriri nke ọrụ na Ịntanetị ma jikọọ na kọmputa maka nhazi. Ebe ọdụ ụgbọ mmiri niile dị n'azụ ikpe ahụ, ọ na-esiri ike ịfu n'ime ha, n'ihi na ha abanye na akara na agba dị iche iche.
Mgbe ejikọta rawụta, gaa na PC ma ọ bụ laptọọpụ gị. Ikwesiri imeghe ogho LAN ma debe TCP / IPv4 solu ka ewe nweta ya.
Gụkwuo: Ịtọlite ​​netwọk mpaghara na Windows 7
Mgbe a manipulations, gaa n'ihu nhazi nke Netgear N300.
Ịhazi ndị na-eduzi routers N300
Iji mepee interface ntọala, malite ihe nchọgharị Ịntanetị ọ bụla, tinye adreesị192.168.1.1ma gaa ya. Ọ bụrụ na adreesị ị banyere abaghị, gbalịarouterlogin.comma ọ bụrouterlogin.net. Nchikota ịbanye ga-abụ Nchikotahadị ka nbanye napaswọọdụdị ka paswọọdụ. Enwere ike ịchọta nkọwa maka ihe nlereanya gị n'azụ ikpe ahụ.
Ị ga-ahụ peeji nke ibe weebụ nke rawụta - ị nwere ike ịmalite nhazi.
Ndị na-emegharị ihe nlereanya a na-akwado nkwado zuru oke - site na PPPoE na PPTP. Anyị ga-egosi gị ntọala maka nhọrọ ọ bụla. Ntọala dị na paragraf. "Ntọala" - "Ntọala Ntọala".
Na nsụgharị kachasị ọhụrụ nke arụmọrụ, nke a maara dị ka NetGear genie, ndị a nọ na ngalaba "Ntọala di elu"taabụ "Ntọala" - "Ntọala Ịntanetị".
Ọnọdụ na aha nke nhọrọ ndị dị mkpa dị na ma firmwares.
A na-ahazi PPPoE njikọ site NetGear N300 dị ka ndị a:
Tinye akọrọ "Ee" na igbe dị n'elu, n'ihi na njikọ PPPoE chọrọ ntinye data maka ikike.
Ụdị njikọ dị ka "PPPoE".
Tinye aha nke ikike na okwu koodu - onye ọrụ ga-enye data a na ogidi "Aha njirimara" ma "Paswọdu".
Họrọ nyochaghachi siri ike nke kọmputa na adreesị ihe nkesa aha ụlọ.
Pịa "Tinye" ma chere maka rawụta iji zọpụta ntọala.
Ejiri njikọ PPPoE.
Njikọ nke usoro nkwekọrịta a kapịrị ọnụ bụ njikọ VPN, ya mere usoro dị iche na PPPoE.
Lezienụ anya! Na ụfọdụ nsụgharị nke NetGear N300, njikọ L2TP anaghị akwado, a ga-enwe nkwalite ngwa ngwa!
Kwuo ọkwa "Ee" na ntinye ntinye ederede maka njikọ.
Nhọrọ nhọrọ "L2TP" na ngọngọ ahọrọ ụdị njikọ.
Tinye data maka ikike natara n'aka onye ọrụ.
Na-esote n'ọhịa "Adreesị Nrụọrụ" Kọwaa ihe nkesa VPN nke onye na-ahụ maka ọrụ ya na Intaneti - uru ahụ nwere ike ịbụ na dijitalụ ma ọ bụ dị ka adreesị weebụ.
Nweta DNS dị ka "Na-akpaghị aka site n'aka onye na-eweta ọrụ".
Jiri "Tinye" imecha nhazi.
A na-ahazi PPTP, nke abụọ nke njikọ VPN dị ka ndị a:
Dị ka ụdị njikọ ndị ọzọ, lelee igbe ahụ "Ee" na nkwụsị n'elu.
Onye na-ahụ maka Ịntanetị n'ọnọdụ anyị bụ PPTP - lelee nhọrọ a na nhọrọ kwesịrị ekwesị.
Tinye ikike data na onye nkesa nyere - mbụ, aha njirimara na passphrase, mgbe ahụ na ihe nkesa VPN.
Ọzọkwa, nzọụkwụ ndị dị iche iche maka nhọrọ ndị dị na mpụga ma ọ bụ IP. Na nke mbụ, dee IP na subnet chọrọ na mpaghara akara. Nhọrọ nhọrọ nke iji aka tinye sava sava, wee tinye adreesị ha n'ubi "Isi" ma "Nhọrọ".
Mgbe ejikọtara ya na adreesị dị omimi, enweghị mgbanwe ọ bụla achọrọ - dị nnọọ ijide n'aka na i tinyela aha njirimara gị, paswọọdụ na ihe nkesa ọma.
Iji chekwaa ntọala, pịa "Tinye".
IP di omimi
Na mba CIS, ụdị njikọ nke adreesị dị omimi bụ inweta nkwado. Na Netgear N300 routers, a na-ahazi ya dị ka ndị a:
Na ntinye ntinye maka ozi njikọ, họrọ "Mba".
Na ụdị nnata a, data niile dị mkpa sitere n'aka onye ọrụ, ya mere jide n'aka na a ga-edozi nhọrọ adreesị "Nwee ike / na-akpaghị aka".
Eziokwu na njikọ DHCP na-emekarị site n'ịlele adreesị MAC nke ngwa. Maka nhọrọ a iji rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, ịkwesịrị ịhọrọ nhọrọ. "Jiri adreesị MAC nke kọmputa" ma ọ bụ "Jiri adreesị MAC a" na ngọngọ Adreesị Nyocha Router. Mgbe ị na-ahọrọ ala ikpeazụ, ị ga-achọ iji aka dee aha achọrọ.
Jiri bọtịnụ "Tinye"iji mezue usoro ntọala.
Usoro maka ịhazi onye router maka njikọ IP sticking fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu okwu adreesị.
Na mpịakọta dị elu nke nhọrọ, lelee igbe ahụ "Mba".
Ọzọ, họrọ "Jiri adreesị IP" ma dee ihe achọrọ achọrọ na mpaghara akara.
Na ngalaba aha nkesa ngwugwu, ezipụta "Jiri sava DNS ndị a" ma tinye adreesị nke onye ọrụ ahụ nyere.
Ọ bụrụ na achọrọ, debe ihe ejiri aka na adreesị MAC (anyị na-ekwu banyere ya na ihe ahụ gbasara IP dị ike), wee pịa "Tinye" iji mezue nduzi.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịmepụta ma adreesị adreesị ma dị omimi dị mfe.
Maka ọrụ zuru oke nke njikọ ikuku na router na ajụjụ, ịkwesịrị ime ọtụtụ ntọala. Mkpa ndị dị mkpa dị na "Echichi" - "Ntọala Ntanetị".
Na Netgear genie firmware, nhọrọ dị na "Ntọala di elu" - "Mbido" - "Ịmepụta netwọk Wi-Fi".
Iji hazie njikọ ikuku, mee ihe ndị a:
N'ọhịa "SSID Aha" Dee aha achọrọ nke Wi-Fi.
Mpaghara depụtara "Russia" (ndị ọrụ si na Russia) ma ọ bụ "Europe" (Ukraine, Belarus, Kazakhstan).
Nhọrọ ọnọdụ "Ọnọdụ" dabere na ọsọ nke njikọ Ịntanetị - tọọ ọnụ ahịa kwekọrọ na oke bandwidth nke njikọ.
A na-atụ aro nhọrọ nchekwa ka ịhọrọ "WPA2-PSK".
Nke ikpeazụ na eserese "Paspọsọ" tinye paswọọdụ iji jikọọ Wi-Fi, wee pịa "Tinye".
Ọ bụrụ na etinyere ntọala niile n'ụzọ ziri ezi, njikọ wi-fi na aha ahọrọ ahọpụtara ga-apụta.
Routers Netgear N300 nkwado nhọrọ "Ntọala Nchekwa Wi-Fi"Na nkenke, WPS, nke na-enye gị ohere ịbanye na netwọk ikuku site na ịpị bọtịnụ pụrụ iche na router. Enwere ike ịchọta ozi gbasara atụmatụ a na nhazi ya na ihe dị mkpa.
Gụkwuo: Gịnị bụ WPS na otu esi hazie ya
Nke a bụ ebe Netgear anyị nhazi N300 ga-abịa na njedebe. Dịka ị pụrụ ịhụ, usoro ahụ dị mfe ma ọ dịghị achọ ka ọ bụrụ ọkachamara ọ bụla site n'aka njedebe ikpeazụ.